တန်ဆောင်မုန်းလသည်. မြန်မာလများတွင် ရှစ်လမြောက်ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျရောက်သည်. . . ဤလတွင် "ကထိန်အလှူပွဲတော်၊ မသိုးသင်္ကန်းရက်လှူပွဲ၊ ပံ့သကူပစ်ပွဲ၊ ကြာသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ၊ တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲတော်၊ သာမညဖလ အခါနေ့ပွဲတော် "တို့ကို ကျင်းပကြသည်.......။
ကြွပြောင်ပြောင် အသရေ တင့်ပါဘိ
ခါအချိန် မြောက်လေ သွေးတယ်
တန်ဆောင်မုန်းလကို စန်းလသော်တာ ၀ိုင်းစက် ပြည့်ဝန်းသော လ၊ ကြိတ္တိကာနှင့် ယှဉ်၍ နက္ခတ်တာရာ အစုံအလင်တို့ဖြင့် တန်ဆာဆင်ယင်သော လ၊ ဟေမန္တ ဆောင်းကာလကို စတင် ချဉ်းနင်း ၀င်ရောက်သော လ၊ ကထိန်ပွဲတော်ကို ကျင်းပသော လ၊ ရာသီပန်းဖြစ်သော အ၀ါရောင် ခ၀ဲပန်းများ အစီအရီ ပွင့်လန်းသော လ၊ မြူတိမ်မီးခိုးတို့ ကင်းစင်ပြီး ကြည်ကြည်လင်လင် ကျက်သရေတင့်စွာ အဇဋာတစ်ခွင်လုံး ရှုမဆုံးသော လ၊ မြောက်လေ သွေးသဖြင့် အအေးဓာတ်ကို စတင် ခံစားရသော လဟု ကဗျာစာဆိုရှင်များက ဖွဲ့နွဲ့ စပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ကထိန်ပွဲ ခေါ် ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲတော်
ကထိန်ပွဲ ခေါ် ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ ဓလေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဗုဒ္ဓသာသနာ စတင်ရောက်ရှိသော ပုဂံခေတ်(ဘီစီ-၁၆၇-
၁၂၈၇) ကပင် အထူးတလည်ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
ကထိန်ဟူသော ဝေါဟာရသည် ပါဠိဘာသာ
(၂)လုပ်ငန်းကိစ္စများ လွယ်ကူပေ့ါပါးစွာ ဆောင်နိုင်ခြင်း၊
(၃) အစားအသောက်များမှ ဘေးရန်မကျရောက်ခြင်း ၊
ပစ္စည်းဥစ္စာများ မပျက်မစီးနိုင်ခြင်း နှင့် ၊
(၅) မိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကို အနှောက်အယှက်မဲ့ ကိုယ်တိုင်
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှ နောက်တစ်ရက်မကူးမီအချိန်ထိ ယက်လုပ်ချုပ်ငင်ရသော
အချို့ အရပ်ဒေသများတွင်မူ ၊ ပဒုမ္မာကြာပန်းမှ ကြာမျှင်များကို ထုတ်ယူ၍ ကြာသင်္ကန်း
မီးရှူးတိုင် ၊ အလင်းတိုင်” ကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရှေးသုတေသီတို့ အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာ မထွန်းကားမီ တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်ကို မီးနက္ခတ်နှင့် ဗိဿနိုးနတ်မင်းကြီးကို ပူဇော်သော ပွဲတော်မျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုနတ်မင်းကြီးသည် ၀ါဆိုလဆန်း ၁၂-ရက်နေ့မှ စတင်၍ အိပ်ရာဝင်ခဲ့ရာ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၂-နေ့ (၄-လတိုင်တိုင် အိပ်ပြီး) မှ နိုးထလာသည်ဟု အဆိုရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍လည်း ရှေးက ဤလကို “နတ်နိုးလ” ဟု ခေါ်ကြသ! ည်။ နိုးထလာသည့် နတ်မင်းကြီးကို ဆီမီးတို့ဖြင့် ထွန်းညှိပူဇော်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအစဉ်အလာသည် ဟိန္ဒူဘာသာတို့၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ဖြစ်ပုံ ရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဒီပါဝလီ (သို့မဟုတ်) ဒီဝလီ (မီးထွန်း) ပွဲတော်ကို အိန္ဒိယတွင် ဤခတ္တိကာ (Kartika) လ၌သာ ကျင်းပနေဆဲ ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ အိန္ဒိယ၏ယဉ်ကျေးမှုကို လက်ခံရယူခဲ့သည့် မြန်မာတို့ကလည်း ဤထုံးတမ်းကို ဆက်လက် ကျင့်သုံးကြဟန် တူသည်။ သ!ို့သော် ဗုဒ္ဓဘာသာကို လက်ခံကျင့်သုံးပြီးနောက် ခေတ်ပြောင်း လာသည့်အလျှောက် မီးထွန်းခြင်း၏ အနှစ်သာရ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲကောင်း ပြောင်းလဲ သွားပေလိမ့်မည်။ နတ်မင်းကြီးကို ပူဇော်မည့်အစား ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို ပြောင်းလဲ ပူဇော်လာကြခြင်း ဖြစ်တန်ရာသည်။
ဤအချိန်ကာလတွင် ရာသီဥတု ကြည်လင်သောကြောင့် ၊ လူအများတို့ 
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညတွင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သမညဖလသုတ်ကို ဟောကြားခဲ့သဖြင့် သာမည ဖလ အခါတော်နေ့ဟုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာတို့က သတ်မှတ်ကြသည်။ သာမညဖလ အခါတော်နေ့ အကြောင်းကို ပြောရလျှင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ နီးပါးက အကြောင်းအရာ တစ်ရပ်ကို ပြောရပါမည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ လက်ထက်တော်က ဖြစ်သည်။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည့်ရှင် အဇာတသတ်မင်းသည် သာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသည့် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့် ည၏အလ!ှအပကို ကြည့်ပြီး-
၄။ ပါသာဒိကာ ဝတ=ကြည်လင်ရွှန်းပသော ညပါတကား။
၅။ လက္ခညာ ဝတ= မေ့မရနိုင်သော ညပါတကား - ဟု ရင်တွင်းဖြစ် စကားငါးခွန်းဖြင့် ထုတ်ဖော် ချီးမွမ်းတော်မူပါသည်။
အဇာတသတ်မင်းသည် ဖခမည်းတော် ဗိမ္ဗိသာရကို သတ်မိသည့် ကြီးလေးသော အပြစ်ကံကြောင့် ကြည်နူးသာယာဖွယ် အတိပြီးသည့် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ည၏ အလှအပကို အပြည့်အ၀ မခံစားနိုင်ပါ။ ခမည်းတော်အပေါ် ကျူးလွန်မိသည့် အဖသတ်ကံ ဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်း ကျိန်းစက်လိုက်တိုင်း ထိတ်လန့် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အိပ်မက်က ခြောက်လှန့်နေသည်။ ကျုးလွန်ခဲ့သည့် မကောင်းမှု ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကို တ၀ိုးတ၀ါး ပြန်မြင်ယောင်လေလေ ကျိန်းစက် မရလေလေ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညတွင် ညီလာခံတစ်ရပ် ခေါ်ယူလိုက်ပြီး မှူးမတ်ဗိုလ်ပါတို့အား အထက်ပါ စကားအတိုင်း မိန့်ကြားခဲ့သည်။
မင်းကြီး၏သဘောထားကို အကင်းပါကြသော မှူးမတ်ဟူးရာတို့က မင်းကြီးစကား၏ နောက်ကွယ်တွင် ဘာကို ဆိုလိုမှန်း သိလိုက်ကြသည်။ ထိုကြောင့်လည်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေး ဂိုဏ်းဆရာကြီးများတို့၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို အသီးအသီး ထုတ်ဖော် ချီးကျူးကာ လျှောက်တင်ကြသည်။ တစ်ဆက်တည်း ထိုဂိုဏ်းဆရာကြီးတို့ကို ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့် မင်းကြီး ခံစားနေရသည့် ဝေဒနာဆိုး အိပ်မက်ဆိုးမှ နို!းထလာမည် အမှန်မသွေဟုလည်း အာမခံကြသည်။
အမတ်အများစု ထုတ်ဖော်ကြသည့် သူတို့ဂိုဏ်းဆရာများ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အဇာတသတ်မင်း စိတ်ဝင်းစား၍ မရနိုင်။ ထင်ရှားကျော်ကြားနေသည့် ဆရာကြီးခြောက်ဆူဖြစ်သော ပူရဏကဿပ၊ မက္ခလိ ဂေါသာလ၊ ကေသကမ္ဗလ၊ ပကုဓ ကစ္စာယန၊ မဟာဝီရ၊ သဉ္စယ-တို့၏အကြောင်းကို မင်းကြီး ကောင်းစွာ သိနှင့်နေပြီ ဖြစ်သည်။ လတ်တလော ခံစားနေရသည့် သူ၏ ကုရာနနတ္ထိ ဆေးမရှိသည့် စိတ်ရောဂါကို ဤဆရာကြီးတို့က ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်မှန်း စိတ်တွင်းမှနေ မင်းကြီး အလိုလို သိရှိနေသည်။ ထိုကြောင့်လည်း စိတ်ဝင်စား၍ မရနိုင် ဖြစ်နေသည်။
ဘာမှ လျှောက်ထားခြင်း မပြုသည့် ဇီဝကအမတ်ဘက်ကို မင်းကြီး လှည့်ကာ “ဘာကြောင့် တိတ်ဆိတ်နေသလဲ” ဟု မိန့်သည်။ ခွင့်ရလျှင်ရချင်း ဇီဝကအမတ်က မြတ်စွာဘုရား ရှိရာအရပ်ကို လက်အုပ်ချီ ကန်တော့ပြီးနောက် မင်းကြီးကို ဤသို့ လျှောက်တင်ခဲ့သည်-
“အရှင်မင်းကြီး ..ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနဲ့ ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ ဗုဒ္ဓအရှင် ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သရက်ဥယျာဉ်မှာ ရဟန်းတော် တစ်ထောင့်နှစ်ရာ့ငါးဆယ်နဲ့ အတူ သီတင်းသုံး နေတော်မူတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားတဲ့ တရားတော်ဟာ အစ၊ အလယ်၊ အဆုံး ကောင်းခြင်း သုံးဖြာ၊ အင်္ဂါ ခြောက်သွယ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ တရားတော် ဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ တပည့်သာဝကတွေဟာ ဖြောင့်မတ်ခြင်း စတဲ့ အင်္ဂါကိုးတန်၊ ငြိမ်းအေးသည့် နိဗ္ဗာန်နန်းကို အာရုံပြုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုသာ ချဉ်းကပ်ခွင့်ရပါမူ အရှင်မင်းကြီး ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာများ သက်သာ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ကြည်ရွှင် လာပါလိမ့်မယ်” ဟု လျှောက်တင်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူသော စကားကို ကြားရရုံဖြင့် အဇာတသတ်မင်း၏ စိတ်တို့သည် လှုပ်ရှား လာသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ဆီသို့ သွားရန် သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
အဇာတသတ်မင်း ဘုရားရှင်ကို အဖူးအမျှော် သွားရောက်သည့် အချိန်ကား တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် ညချမ်းချိန်ခါ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် မြတ်စွာဘုရားက ရာဇဂြိုဟ် မြို့နှင့် မနီးမဝေး သမားတော်ကြီး ဆရာဇီဝက လှူဒါန်းထားသည့် သရက်ဥယျာဉ်တွင် သီတင်းသုံးစဉ် ကာလ ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘုရား ရှိရာသို့ ဘုရင် ထွက်ခွါသည့်အခါ နန်းမြို့တော် အရှေ့ဘက် တံခါးမှ ထွက်ရသည်။ ဤတံခါးထွက်ပေါက်သည် တောင်ရိပ်နှင့် သစ်ပင် အရိပ်အ၀ါသများ ထူထပ်သဖြင့် လူသွားလမ်းပေါ် အမှောင်ရိပ် ကျရောက်နေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး မဟူရာရောင် အမှောင်ရိပ်တို့ကသာ ဖုံးအုပ် လွှမ်းခြုံးထားသည်။ ထိုကြောင့် ရဲမက်အပါအ၀င် လိုက်ပါသူတွေ အားလုံးတုိ့က မီးရှူး မီးတိုင်တို့ကို ထွန်းကာ ကိုင်ဆောင်၍ သွားရောက်ခဲ့ကြရသည်။ (ဤကို အကြောင်းပြု၍ တန်ဆောင်တိုင် ရောက်တိုင်း မီးထွန်းပွဲတော်ဖြင့် ဘုရားရှင်ကို ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပသည့် အလေ့အထ စတင် ဖြစ်တည်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကြပါသည်။)
ဘုရားရှင်က အဇာတသတ်မင်းနဲ့တကွ စုရုံး ရောက်လာကြသည့် ရာဇဂြိုဟ်၏ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပြည်သူ ပြည်သားတို့ကို သာမညဖလ သုတ္တန် ဒေသနာတော်ကို ဟောကြားတော် မူသည်။ အလွန်သာယာ လှပ၍ တောတောင်ရိပ်တို့ဖြင့် အေးချမ်း ဆိတ်ငြိမ်နေသည့် လပြည့်ညမှာ ဗုဒ္ဓ ဟောကြားသည့် ဤတရားတော်သည် နောင်တတစ်ဖန် ပူပန်မှုတွေဖြင့် ဆူပွက်လောင်မြိုက် နေသည့် အဇာတသတ်မင်း၏ နှလုံးသားကို အေးချမ်းသာယာမှု ဆောင်ကျဉ်း ပေးနိုင်စွမ်း ရှိခဲ့ပါသည်။
သာမညဖလသုတ္တန် တရားတော်သည် ရဟန်းပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးကို ပေါ်လွင်အောင် ဟောကြားထားသည့် တရားတော် ဖြစ်သည်။ ဤတရားတော်သည် သုတ္တန္တပိဋကတ်၊ ဒီဃနိကာယ်၊ သီလက္ခန္ဓဝဂ္ဂ ပါဠိတော်မှ လာသော တရားတော် တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ သာမညဖလ (သာမည-ရဟန်း၊ ဖလ- အကျိုးကျေးဇူး) - ရဟန်းပြုသောသူတိုင်း ရဟန်းပြုခြင်းကြောင့် ရရှိခံစားရသည့် လက်ငင်း အကျိုးကျေးဇူးများ အကြောင်း ဖြစ်သည်။
၇။ ဣနြေ္ဒ ၆-ပါးတို့၌ အကုသိုလ် မဖြစ်အောင် စောင့်စည်းနိုင်ခြင်း အကျိုး။ (ဤသည်တို့ကား အခြေခံသီလများ ဖြစ်ကြပါသည်)။
အခြေခံသီလ ၊သတိ၊ သမ္ပဇဉ် ၊ သန္တုဋ္ဌီ တရားများနှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည် သမထ ဝိပဿနာ တရားကို ဆက်လက်အားထုတ်ပါက အေက်ပါ အကျိုးများကို လက်တွေ့ ခံစား ရရှိနိုင်ပါသေးသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သူ့အတွက် ဟောကြားသည့် အခရာ အကျဆုံးမှာ- “မင်းကြီး အကြင်သူသည် အပြစ်ကို အပြစ်ဟု သိမြင်သဖြင့် အကြောင်းအားလျော်စွာ ကုစားသည်။ နောင်အခါ စောင့်စည်းသည်။ ထိုသူ၏ ကုစား စောင့်စည်းခြင်းသည် အရိယာ၏ ဝိနည်း အဆုံးအမ၌ ကြီးပွားခြင်းပင်တည်း” ဟု ဟောကြားချက် ဖြစ်သည်။ ဤမိန့်ဆိုချက်ကို ကြားနာပြီးနောက် မင်းကြီး၏ ပူပန်သောကစိတ်တို့သည် သက်သာရာကို ရစေခဲ့ပါသည်။ စိတ်ကိုကြည်လင် စေခဲ့ပါသည်။
ထိုအချိန်မှ စ၍ အဇာတသတ်မင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦး ဖြစ်လာသည်။ ဗုဒ္ဓကို လည်းကောင်း၊ ဗုဒ္ဓဟောကြား တရားဓမ္မကို လည်းကောင်း၊ ဗုဒ္ဓ၏တပည့်သာဝကတို့ကို လည်းကောင်း အကြည်ညိုဆုံး ပုထုဇဉ်မင်းတစ်ပါး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ဗုဒ္ဓဘုရား (မရှိသည့်နောက်) ပရိနိဗ္ဗာန် စံပြီးနောက် ပထမသင်္ဂါယနာ တင်ပွဲကြီး ဖြစ်မြောက်အောင် သာသနာ့ ဒါယကာအဖြစ် ခံယူကာ သံဃာတော်တို့အား ကူညီခဲ့ပါသည်။ သံဃာတော်၏ ဂုဏ်တော်များကို မင်းကြီးက ခရေစေ့တွင်းကျ နားလည်သဘောပေါက်ထားသဖြင့် သူ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး သံဃာ့ကို အလုပ်အကျွေး ပြုခြင်းဖြင့် ကုန်လွန်စေခဲ့ပါသည်။
ဤသို့ဖြင့် တန်ဆောင်မုန်းလသည် တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော် ကျင်းပရာလ အဖြစ်၊ ဆေးပေါင်း ခသောည အဖြစ်၊ မဟာသမယ အခါတော်နေ့ အဖြစ် ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းကို တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
မြန်မာ့ဆယ့်နှစ်လအကြောင်း၊ တန်ဆောင်မုန်းလ (မောင်ထင်)
ဒီပို့စ်လေးကို ညချစ်သူ ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ နန်းတော် emailmeform ကနေ လူတစ်ယောက် ပို့ပေးလိုက်တာပါ။
အခုလို ပို့ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်လဲ ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ နန်းတော်မှာ ပင်တိုင်စာရေးချင်တယ်ဆိုရင်လဲ အဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။